Python2 Lesson4- Khit Minnyo
Python-for-Hackers Python2 Lesson 4
Python2 Lesson 4
by KhitMinnyo on October 21, 2017 in Python-for-Hackers
အပိုင်း ၃ ထိ သင်ခန်းစာတွေကို မကြည့်ရသေးသူများ အောက်ပါ link ကနေလည်း သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီနေ့မှာတော့ အရေးပါတဲ့ Logical Operatorsဆီကို သွားပါမယ်။
and, or , not ဆိုပြီး Logical Operators သုံးမျိုး ရှိပါတယ်။
Logical Operators တွေကို ရေးတဲ့အခါ while loop နဲ့ ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
while loop လေးတွေ မှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်။
ရှင်းသွားအောင် အောက်ပါ နမူနာ ၂ခုကို လေ့လာလုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။
(In က Input line ကို ဆိုလိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ထည့်ရမှာပါ
Out ကတော့ Output line ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ In ကြောင့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ် ဖြစ်ပါတယ်)
In : user = "admin"
In : password = "khitminnyo"
In : while user == "admin" and password == "khitminnyo":
...: print "Welcome, Admin!"
Enter ၂ချက် ဆင်းတဲ့အခါ ခု နမူနာအတွက် Welcome, Admin! ဆိုတဲ့ စာကြောင်းတွေကို ထုတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ပုဒ်မှာ သေချာကြည့်နော်။ line3မှာ ပြောင်းလဲထားတယ်။
In : while user == "admin" and password == "khitminnyo1":
...: print "Wrong password"
enter ၂ချက်ဆင်းတဲ့အခါ ဘာအဖြေမှ ထုတ်မပေးတာကို တွေ့ရပါမယ်။
ဘာလို့ပါလဲ။ and ဆိုတာ Eng စာမှာ ပေါင်းဆက်ပေးတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။aandbဆိုရင်aနဲ့b၂ခုစလုံးပေါ့။ ဒါကြောင့် ၂ခု စလုံး မှန်မှ ဖြစ်ပါမယ်။
ကဲ အထက်ပါ ဥပမာကိုပဲ နောက်တစ်ခု ထပ်ဆက်ရအောင်။ ခုန အဖြေထုတ်မပေးတဲ့ ဥပမာမှာပဲနော်။
and နေရာမှာ or ပြောင်းရေးရုံပါ။ ကျန်တာတော့ လိုင်3းက အတိုင်းပါပဲ။ ကဲ ကြည့်ရအောင်နော်။
In : while user == "admin" or password == "khitminnyo1":
enter ၂ချက် ဆင်းလိုက်တာနဲ့ မရေတွက်နိုင်တဲ့ထိ Wrong password ဆိုတာကို ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ဥပမာများကို လုပ်ဆောင်ပြီးရင် သင့်အနေနဲ့ မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုခု ရှိလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ အဲသည်မေးခွန်းက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဖြေထွက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ print က ဘာလို့ တောက်လျှောက် မရပ်ဘဲ ဆက်သွားနေတာလဲ??????
တစ်ကြောင်းပဲထုတ်လို့ မရဘူးလား ဆိုတာမျိုး ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဖြေကို ဆက်တိုက်ကြီး အများကြီး ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် python ဖွင့်ထားတဲ့ shell (terminal) ကို ပိတ်ပစ်လိုက်ရတာလည်း ကြုံနေရပြီကိုး။
အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သူ့ကို ဘယ်နေရာမှာ ရပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Break မထည့်ရသေးလို့ပါပဲ။
ဒီတစ်ခါတော့ အထက်ပါပုံစံကိုပဲ ကိန်းလေးတွေနဲ့ ရေးကြည့်ရအောင်ပါ။
In : y = 10
In : while x >4and y < 10:
...: print "Thank you"
enter ၂ချက် ဆင်းလည်း အဖြေထွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။
and ဆိုတဲ့ operator က ၂ခုလုံးမှန်မှ ဖြစ်တာလို့ ပြောထားတယ်နော်။
ဒါကြောင့် အဖြေမထွက်တာ။ y = 10 ဖြစ်ပါတယ်။ y က ၁၀ ဖြစ်ပြီး 10 ထက် လုံးဝ မငယ်လို့ပါပဲ။
အထက်ပါအတိုင်းပဲ and နေရာမှာ or နဲ့ အဖြေထုတ်ကြည့်ပါ။
In : while x >4or y < 10:
Enter ၂ချက် ဆင်းလိုက်တာနဲ့ Thank you ဆိုတာကို ဟိုးအောက်ဆုံးထိ ထုတ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
and နဲ့ or ရဲ့ အသုံးပြုပုံတွေကို နားလည်လောက်ပြီ သိလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာက Logical Operators မှာ and, or , not ဆိုပြီး သုံးခုရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့တာပါ။
ခု and နဲ့ or ကို ရှင်းပြပြီးပါပြီ။ ကျန်တဲ့တစ်ခုကို မှတ်ထားပေးပေါ့။
နောက်မှ ပြောမယ့် အရေးကြီးတဲ့ ဖန်ရှင် ၂ခု ဖြစ်သွားပြီနော်။
တစ်ခုက ဘယ်ဟာလဲလို့ တွေးနေပြီလား??????????????
Rang Function လေး ရေးကြည့်ဖို့အတွက် ရှင်းပြချက်တွေ မပေးတော့ပါဘူး။ အောက်ပါ လိုင်းလေးရေးပြီး enter လိုက်ရင်
အားလုံး သဘောပေါက်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
In : range (10)
ပထမ လိုင်းမှာ range (10) ဆိုပြီး end point ပေးထားတာပါ။ ဒါကြောင့် range ဟာ 10 ထိသော ကိန်းတွေကို ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ထားရမှာက end point ဆိုပေမယ့် <10 10="" 11="" endpoint="" p="">python programming မှာ ကိန်းတွေကို ရေတွက်တဲ့အခါ zero ကနေ စ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ 10 ထက် မကျော်တဲ့ 9
နောက်တစ်လိုင်း ထပ်ရိုက်ကြည့်ရအောင်။ ခုန ရိုက်ခဲ့တဲ့ line 1 အောက်မှာပဲ ဆက်ရိုက်လို့ရပါတယ်။
In : range (2,10)
Out: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
ဒီတစ်ခါမှာတော့ end point သာ မဟုတ်ဘဲ starting point ပါ ထည့်ပေးထားတာကြောင့် မိမိသတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့ စမှတ်2ကနေ ဆုံးမှတ် 10 ထိ ကိန်းတွေကို ထုတ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ နောက်ပုံစံတစ်ခု ထပ်ရေးကြည့်ရအောင်။ ပထမ ရေးခဲ့တဲ့ python terminal ထဲမှာပဲ ဆက်ရေးလိုက်နော်။ ကွဲပြားမှုကို မြင်လွယ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။
In : range (1,10,2)
In : range (2,10,2)
Out: [2, 4, 6, 8]
အထက်ပါအတိုင်း လိုင်း ၂ကြောင်းထိ ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သင် ဘာထူးခြားတာ တွေ့မိပါသလဲ?????
ဟုတ်ပါတယ်။ အစမှတ် ၂ ကနေ အဆုံးမှတ် ၁၀အောက် အတွင်းရှိ ကိန်းတွေကို ထုတ်ပေးသွားတာကတော့ သာမန်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ ထပ်ထည့်ထားတဲ့ ကိန်း2ကြောင့် အစမှတ်ကနေ ၂ပွင့်စီကွာပြီး ရေးသွားတာကို တွေ့ရပါပြီ။
လိုင်3း မှာပြန်ကြည့်ရင် စမှတ် 1, ဆုံးမှတ် <10 2="" auto="" increase="" nbsp="" p="">In : range (1,10,2)
Out: [1, 3, 5, 7, 9] တစ်ကနေ စပြီး ၂ခုစီ တိုးသွားတာ မြင်ရပါမယ်။
လိုင်း4 မှာလည်း ထို့အတူပါပဲ။
အဲသည်နေရာမှာ အရေးပါတာက ခု range မှာ output အဖြစ် ထွက်ရှိလာတဲ့ အဖြေကြောင်းကို ရေတွက်ပုံပါ။ အလွယ်ပြောရရင် အဖြေ အမှတ်စဉ်ပေါ့။
အေဖြကို01234ဆိုပြီး သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဖြေနံပါတ်စဉ်ကို သုညကနေ စတင် ရေတွက်တာ မမေ့နဲ့နော်။
အဖြေအမှတ်စဉ်3ရဲ့ တန်ဖိုးက အထက်ပါ လိုင်းမှာဆို7ပေါ့။ နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ နားမလည်ရင်လည်း မေးခဲ့ပါဗျ။
ခုတော့ for looping လေးနဲ့ ပတ်လိုက်ကြဦးစို့
for looping ရေးဖို့အတွက်တော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ variable တစ်ခု တည်ဆောက်ရပါမယ်။
In :x = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ကျွန်တော်ကတော့ အလွယ်ကလေး ပေးလိုက်တာပါ။ တစ်ကယ်တော့ x,a,b,c,d,e နေရာတွေမှာ စာတန်းတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
In : x လိုင်း၂ မှာ x ကို ပြန်သိချင်လို့ enter လိုက်တာပါ။
Out: ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] ဒီအဖြေ ထွက်လာပါတယ်။
In : x = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
In : for bcc in x:
အဖြေစာကြောင်းတွေ ထွက်လာမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒါကိုပဲ နောက်တစ်မျိုး ပြောင်းရေးကြည့်ရအောင်။
...: print bcc
line4မှာ print ကို ပြောင်းပြီး ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အဖြေက lists လေးတွေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
wifi လိုင်းတစ်ခုမှာဆိုပါစို့။ အသုံးပြု ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ device တွေကို အထက်ပါ ဥပမာက လို x နေရာမှာ မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုနေသူတွေကို list လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ခုလို ထွက်ပော်လာပါတော့တယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပုံကို ပြောပြတာနော် :)
...: print "This is" + bcc
ဆိုပြီး အဖြေထွက်လာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အထက်မှာ bcc တွေ သုံးခဲ့လို့ အောက်မှာ ပြောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလိုကြည့်လိုက်ပါ။
In : for dcc in x:
...: print "This is" + dcc
ပြောစရာတစ်ခုခု ရှိလာပြီလား။ ဟုတ်ကဲ့ အောက်ပါအတိုင်းလည်း ပြောင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။
In : for zcc in x:
...: print zcc
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ bcc တင်မဟုတ်ဘဲ zcc အထိ ကြိုက်ရာပြောင်းသုံးနိုင်တာကို တွေ့ရပါမယ်။ စမ်းကြည့်ပေါ့ :)
ဒီတစ်ခါတော့ ဒီနေ့ ပြောခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေအားလုံးထဲကမှ Range Function နဲ့ For Loop ကို တွဲသုံးလိုက်ရအောင်။
ခေါင်းနောက်နေပြီလား။ မနောက်သေးရင် ဆက်ဖတ်ပြီး လိုက်လုပ်ကြည့်ပါဦး။
In : for get in range (10):
...: print get
python အသစ်ဖွင့်ပြီး လုပ်လိုက်ပါ။ ရောနေမှာစိုးလို့ :)
ဒီနေရာမှာတော့ for နဲ့ range ကို သိနေပြီမို့ ဒီအချက်ကို ရှင်းပြနေဖို့ မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။
range နဲ့ အတူတူပဲမလားလို့ ထင်ရင်တော့ range function လေးကို ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။
မတူတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဆက်လုပ်ကြည့်ပါဦး။
In : for hoo in range (1,20,2):
...: print hoo
start, end နဲ့ increase point တွေ ပါတဲ့ range ကိုရှင်းပြပြီးသားနော်။ မေ့သွားရင် ပြန်ဖတ်ပြီး ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
for နဲ့ range နဲ့တွဲလိုက်မှ အမှတ်စဉ်တွေကို lists လုပ်ပြီး စီရေးချပေးသွားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်ထိ သင်ခန်းစာလေးတွေကိုပဲ ထပ်ခါ ပြန်လုပ် လုံးဝ မကြည့်တော့ဘဲ အလွတ် ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။
Lesson5ကြည့်ရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
<10 10="" 11="" endpoint="" p=""><10 2="" auto="" increase="" nbsp="" p="">
ကျွန်တော်တို့ Website မှာ တင်ထားပေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Menu အလိုက် ရွေးချယ်ကြည့်လိုပါက ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီးလည်း ရွေးချယ်နိုင်သလို အောက်ပါ ပုံထဲက လို Menu Box ကနေလည်း Filer လုပ်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
By KhitMinnyo on October 21, 2017